SomaliTalk.com » 2013 » August » 02
Home » Archive Maalinta August 2nd, 2013
Qaarada Yurub oo kasoo kabaneysa hoos u dhicii dhaqaalaha
Guud ahaan dhaqaalaha wadamada yurub ayaa sanadihii ugu dameeyey ahaa mid aan wanaagsanayn. Wadamo badan ayaa waxaa soo wajahay jahwareer dhaqaale. Waxaa kordhay cadadka dadka aan shaqo haysan, waxaa hoos u dhac ku yimi qiimaha lacagta ee wadamo badan. Waxaa yaraaday wax soo saarkii guud ee wadamo badan. Waxaa meesha ka baxday kalsoonidii ay dadka caadiga ah iyo shirkaduhu ku qabeen in dhaqaaluhu...
Golaha Wasiirada DFS oo Ogolaaday heshiis shirkad lagu magacaabo Bureau Veritas Pre-Inspection, taasoo ka shaqeyn doonto hubinta tayada raashinka dibadda laga keeno iyo weliba daawooyinka
Afhayeenka Xukuumada Xukuumada Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa sheegay in Golaha Wasiirada DFS “ay fasaxeen heshiiska shirkad lagu magacaabo Bureau Veritas Pre-Inspection, oo ay horay u saxiixday dawladdii KMG aheyd, taasoo ka shaqeyn doonto hubinta tayada raashinka dibadda laga keeno iyo weliba daawooyinka, waxayna shirkaddani ka howlgashaa 120 dal oo caalamka ah, waxaana adeega shirkadani uu...
Kuu Talin Maa, Ii Tali Meysid Waa Tilmaan ay Warbaahintu ku Tallaabsatay !!
Tan iyo wixii ka dambeeyay Burburkii Xukuumaddii Dhexe ee Milateriga ahayd waxaa Geyiga Soomaaliya ka hana qaadday Saxaafad Madaxbanaan oo runtii la dhihi karo waxa ay soo martay Marxalado kala duwan iyo heerar kala gedisan . Read More →
Wargeyskii Dowladda oo Afka Sharooto laga saarey!!
Laga soo bilaabo Xiligii Wasiirka uu ka ahaa Wasaarada Warfaafinta Cabdikarim Xasan Jaamac waxaa la Dareemayey in Wasaaradu Qaybaheeda kala duwan uu Isbedel Deg deg ah ku imaanayo , sababtoo ah waxaa uu kiciyey Qaybo dansanaa sida TV-ga Qaran iyo Wargeyska dalka oo isagu Todobaadkii si joogto ah u soo bixi jirey iyadoo lagu soo daabaci jirey Magaalada Nairiobi Read More →